Porn နှင့် Erotica တွင်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုခြောက်ခု - ယခုအင်တာနက်သည်အမှန်တရားနှင့်မကိုက်ညီသောလိင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပေးသည် - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Porn နှင့် Erotica တွင်မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုခြောက်ခု - ယခုအင်တာနက်သည်အမှန်တရားနှင့်မကိုက်ညီသောလိင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပေးထားသည်။
Porn နှင့် Erotica ခြောက်မကြာမီကတီထွင်
By လီယွန်အက်ဖ် Seltzer, Ph.D ဘွဲ့ကို
Created ဇွန် ၂၀ ရက် ၂၀၁၂ - ၁၀:၃၁
အင်တာနက်ကို erotica ၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်းသူတို့လိင် supercharged ပုံများ, ဗွီဒီယိုများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ကျွမ်းကျင်စွာနိုင်နေပါလျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးတွင်ရှိသောအမြတ်အစွန်းကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ နှင့်ဇာတိပကတိလူစိတ်လှုပ်ရှားဘို့ရှာဖွေနေသူ '' အဆုံးမဲ့ရှာပုံတော်ဖွညျ့ဆညျးဖို့ဤလုပ်ငန်းရှင်များအစွမ်းထက်ခေါ်ဆောင်သွားတွေကိုနှင့်အတူ brimming လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့လှုံ့ဆော်မှု generated ပါပြီ။
၏နီးပါးသံလိုက်ဆွဲ လိင် Web ပေါ်ရှိဒါရရှိနိုင်အမျိုးသမီးတွေအဖြစ်ယောက်ျားနှင့်တစ်ခုလုံးကိုလိင်တူချစ်သူလူဦးရေ, မင့်လိင်ကွဲ (ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာသော်လည်း) ချိတ်ဖို့အကူအညီမဖြစ်ပါတယ်။ ဤအစိတ်ကူးယဉ်ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု၏အလွန်အသစ်အဆန်းများနှင့်ထူးခြားသောသဘာဝတရားသူတို့ arousal အရှိန်မြင့်နှင့်ခက်ခဲ-to-ကျေးဇူးပြုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစားချင် gratify လိမ့်မယ်သောဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးမြှင့်။ နှင့်နည်းပညာတိုးတက်လာသည်ယခင်ကမဖြစ်နိုင်ပါခဲ့နည်းလမ်းတွေအတွက်လိင်စိတ် stoking, ဒီစီးပွားဖြစ်ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းသေးသည်အခြားရှုထောင်ထည့်ပါ။ အဆုံးရလဒ်ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှုသင့်ရဲ့များ၏အပျြောအပါးစင်တာများဖွင့်ယူကာနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ ဦးနှောက် အစဉ်အဆက်မတိုင်မီတည်ရှိကြောင်းဘာမျှမလို။ "whew!", ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့
အဆိုပါဥပမာကိုငါ Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံအချစ်ဇာတ်လမ်း / လိင် / ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အချို့သောတီထွင်မှုချဉ်းကပ်တစ်ခုခုသို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးကိုင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဘယ်လိုဥပမာပေးရဖို့ကိုသုံးပါလိမ့်မယ် စှဲမွဲမှု (နှင့်ပင် headfirst ထဲသို့ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့တွန်း) မှလာကြလိမ့်မည် တစ်ဦးကဘီလီယံဆိုး Thoughts: ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစမ်းသပ်မှုလူ့ Desire အကြောင်းဖော်ပြဘယ်အရာကို (Ogi Ogas နှင့်စိုင်း Gaddam အသုံးပြုပုံ 2011) ။ ဒီလာမယ့်-to-နောက်ဆုံးပို့စ် (ဒီအရေးကြီးသောစာအုပ်အပေါ် အခြေခံ. ငါ၏အ 11-တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစီးရီး၏အစိတ်အပိုင်း 12) ၌ငါတတ်၏အမျိုးမျိုးအနည်းငယ်ကိုယ်စားလှယ်ဥပမာအင်တာနက်ကိုပူဇော်ပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းလိင်မှန်ထမ်း။ သို့သော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ arousal ချီးမြှင့်တွက်ချက်တချို့မြင်ကွင်းများနှင့်ပုံပြင်များဖော်ပြပြီးနောက်, ငါသတိပေးမှတ်ချက်အပေါ်ပြီးဆုံးသောငါ၏နောက်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းမှအပေါ်ကိုရွှေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီညစ်ညမ်းရဲ့အများအပြားထင်ယောင်ထင်မှားကျွန်တော်တို့ကိုအပေါ်ရှိသည်နိုင်သောခြွင်းချက်ပါဝါပေးထားသည် (သို့မဟုတ် ကျော်လွန်ကျွန်တော်တို့ကို), သူတို့ကနောက်ဆုံးမှာထိခိုက်စေ-In နိုင်ပါတယ်မမျှော်လင့်ဘဲအပျက်သဘောဆောင်သောနည်းလမ်းများကို-ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်, လိင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအမြင်များနှင့်ရင်းနှီးသောသမျှဆက်ဆံရေးဟာကျနော်တို့အတွက်ကိုယျ့ကိုယျကိုတှေ့ရပေမည်။
ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာငါသောအသိပေးချက်နှင့်အတူ (အမှန်တကယ် illusional အဖြစ်ရှုမြင်ခံရဖို့ထိုက်ကြောင်း erotica နှင့်ညစ်ညမ်း၏မျိုးအချို့အားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ချင်ပါတယ် အများဆုံး ဒီ evocative ပစ္စည်းကြောင့်သံသယမရှိပိုပြီးလုပ်ကြံရဲ့အတွင်း illusional အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်ပို) အစစ်အမှန်ထက် "ထလုပ်" ။ နှင့်လည်းထိုကဲ့သို့သောထင်ယောင်ထင်မှားထုတ်လုပ်များ၏ရည်မှန်းချက်တဏှာပေးသွားနိုင်ရန်, ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ကြောင်းကိုစိတ်တွင်စောင့်ရှောက်လော့။ ပိုစွဲလမ်းများအတွက်သူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်သူသူတို့၏ "ထုတ်ကုန်," သင်ပိုမိုများအတွက်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ပါစေ။ ။ ။ နှင့်ပိုပြီး။
ဤသည် Ogas နှင့် Gaddam အခွအေန၏စွဲလမ်းအလားအလာအနှစ်ချုပ်ဖို့ကြိုးစားပုံ: "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏အချို့သောမျိုးအတူတကွကြှနျုပျတို့ချေါသိမှုဆိုင်ရာအာရုံပရိယာယ်တစ်ခုမျိုးအတွက်မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပေါင်းစည်း ခေါ်ဆောင်သွားထင်ယောင်ထင်မှား။ ခေတ်မီနည်းပညာနှင့်အချို့သောအလွန်လူ့အတူ တီထွင်ဖန်တီးမှုရှေးခေတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုယခုအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်စပ်စုသစ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားမတရားသောမှမြင့်တက် "(စစ။ 214-15) ပေးခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင် dupe သို့မဟုတ် hyperstimulate နိုငျသောဝတ္ထုပေါင်းစပ်အတွက်အတူတကွ spliced ​​နေကြသည်။
Transsexual ("Shemale", "T-Girl" သို့မဟုတ် "Ladyboy") porn
ငါပြီးသားများ၏ခေါ်ဆောင်သွားထင်ယောင်ထင်မှားဆှေးနှေးခဲ့ပြီးပြီ shemale အစောပိုင်းကရေးသားချက်များအတွက် porn (ဥပမာတွေ့ “ မင်းကိုဖွင့်ပေးတာတွေကိုမင်းအများကြီးမကူညီနိုင်ဘူး”) ။ ဒါနဲ့သာအကျဉ်းချုံးကဒီမှာ-နှင့်ပေါ်မှာမထိတစ်ဦးအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသောစီး မှနေ. ပါလိမ့်မယ်။ အမြားအပွားဟော်မုန်းကုသမှုမှတဆင့်ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်တယောက်အမျိုးသမီးများ X-rated ဗွီဒီယိုများ (အဘယ်သူကိုများအတွက်အဓိကပရိသတ်ကိုလိင်ကွဲယောက်ျားဖြစ်ပါတယ်), အမျိုးသမီးတစ်ဦး (သို့မဟုတ်ဟောင်းသည်လူ) ၏ခန္ဓာကိုယ်မှပူးတွဲပါတဲ့လိင်တံ၏ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူကြည့်ရှုသူတင်ပြသူကို, ယခုဿုံ rounded ရင်ပတ်နှင့်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးအမျိုးသမီးပုံကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ဒါကြောင့် (များလွန်းခြင်းနှင့်အများအပြားရိုးရိုးယောက်ျား,) လိင်ကွဲယောက်ျားနှိုးဆွသောတွေ့ရသောအခြား ပို. ဘုံအမြင်အာရုံတွေကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်သည့်အခါနှင့်တစ်ခုစိုက်ထူလိင်တံ၏ "တန်ဆာဆင်" အဖြစ်ကောင်းစွာ-အထူးသဖြင့်ဇာတ်နိမ့်အဘို့ပေမယ့်အများဆုံးဖြောင့်ဘို့မပေးရုံအစွမ်းထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue ဖြစ်ပါသည် ။ ဤသည် shemale porn လူအများစုစိတ်ကူးစေခြင်းငှါ, ထက်သော web ပေါ်မှာပိုပြီးလူကြိုက်များရှာဖွေရေးအမျိုးအစားသို့မဟုတ် "နယ်ပယ်," သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို-ကြောင်း, အများဆုံးနှင့်အတူပုံမှန်အတိုင်းသှေးဆောငျဣတ္တွေကိုဖြစ်ပါသည်နှစ်ခုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောမျိုး Juxtapose ထူးဆန်းသော ယင်းစိုက်ထူအထီးလိင်၏ cue ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို-နှငျ့သငျတို့သညျရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက် inflaming နိုင်စွမ်းရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်း၏ကြင်နာရ။
ဂျပန်အယ် (သို့မဟုတ် Hentai)
ဂျပန် anime [ခေါ်ဆောင်သွားကာတွန်း] သို့မဟုတ် hentai ဒီထူးဆန်း risque ဦးတည်ချက်အတွက် ပို. ပင် flagrantly ကျွန်တော်တို့ကိုကြာပါတယ်။ ထိုအဖြစ်နိုင်ခေါ်ဆောင်သွားထင်ယောင်ထင်မှားအဖြစ်မှန်အပေါငျးတို့သပုံမှန်သတ်ခြင်းမှလွတ်မြောက်လာကြသည်။ အဖြစ်လူသိများဒီတော့တယောက်ဇာတ်ကောင်, futanariကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်စိတ်ယခုဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံး idyllic အရပ်ဌာန၌ဆင်းသက်တော်မူကြောင်းကို၎င်းထင်ယောင်ထင်မှားအရှိန်မြင့်နိုင်ပါတယ်။ Ogas နှင့် Gaddam ကထားအဖြစ်: "Futanari ဇာတ်ကောင်ကြီးမားလှည့်လည်ရင်ပတ်နှင့် hourglass ကိန်းဂဏန်းများ, ရှည်လျားသောမျက်တောင်နှင့်အတူကြီးမားသောမျက်စိနှင့်အဆင်းလှမျက်နှာများနှင့်အတူပုံမှန်အား, hyperfeminine အလောင်းနှင့်အတူ [အထီးအဘို့အခြားအင်အားကြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်] အလွန်ငယ်ရွယ်ရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ သူတို့ကအစဧရာမမြင်းအရွယ် penises "[!] (စ။ 219) အပိုင်။
အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကိုပြန်လာ, ယောက်ျားရဲ့ပင်ကိုအလိုဆန္ဒ software ကို activate လုပ်ဖို့တယောက်မော်ဒယ်များနှင့်မင်းသမီးအလုပ်သမားအပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲအဆိုပါသော်လည်း (မည်သို့ပင်ဆိုစေလုံးဝစစ်မှန်ပုံပေါ်သောသိုင်းကြိုး-အပေါ် dildos ဝတ်ထားအမှန်တကယ်အမျိုးသမီးတွေအသုံးပြုနေသည် အရွယ် သူတို့ရဲ့အတုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏, ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး,) နီးပါး absurdly ပုံကြီးချဲ့ထင်ရနိုငျသညျ။ ဤသည်ကအခြားရွေးချယ်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလတ်ဆတ်သော (ပြောမရ, ခြောက်ချား) juxtaposition မှတဆင့် arousal များအတွက်ယောက်ျားရဲ့အထူးလွယ်ကူစွာထိခိုက် exploit မှအကူအညီမသေးသည်အခြားခေါ်ဆောင်သွားထင်ယောင်ထင်မှားတွေ့ရမယ်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသမီး appendage ဘို့ခွင့်ပြုသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုလည်းလကျအောကျခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍအပေါ်တစ်ဦးအလှည့်-On အဖြစ်အများအပြားယောက်ျားအတွေ့အကြုံကိုယူပြီးပတ်သတ်ပြီးအဖြစ်ယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးစိတ်သန်းမှအယူခံနိုငျသညျ။
အစောပိုင်းကပို့စ်များ, အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို-အဖြစ် men's-ဖြစ်ကြသည်မှာတစ်ကြိမ်အောက်သာဂရပ်ဖစ်နှင့်ပိုပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ နှိုင်းယှဉ်အတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာအဖြစ် ဒါကြောင့်အဘယျသို့များ၏ဘုံတှငျ illusional shemale porn များအတွက်တရားမျှတစွာ analogue ဖြစ်စေခြင်းငှါ, အမြိုးသမီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား? သငျသညျခဲခြင်း, အံ့သြအောင်မြင်သော Stephenie Meyer ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်စီးရီးထက်မဆိုထပ်မံကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါသည် ဆည်းဆာအဖြစ်လူသိများမကြာသေးခင်ကခွဲအမျိုးအစားများ၏ပိုပြီးသိသာဥပမာတစ်ဦးအဖြစ် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်း။ "လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်း, sexy Vampire, lusty ဝံပုလွေများနှင့်တစ်ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံကျော်: ပြီးတာနဲ့ပို, အစဉ်အဆက်ကပိုစွဲလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလုပ် Ogas နှင့် Gaddam မှတ်ချက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာရဲ့အဘယ်အရာကိုအလေးပေး သဘာဝလွန် beasties ။ လူကြိုက်အများဆုံးအချစ်ဇာတ်လမ်းသူရဲကောင်းများနှင့်ဘိန်းဖြူအဖြစ်မျှသာလူကိုအစားထိုးကြပါပြီ "အဘယ် Meyer ရဲ့သူရဲကောင်း, Bella Swan ထက်ပိုမိုလိုက်စားနိုင်, ကိုရှေးခယျြဖို့ဖိအားပေးခံရ" angsty သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်စတားမင်းသမီးကအက်ဒွပ် Cullen ကနှင့်သစ္စာစောင့်သိဝံပုလွေစတားမင်းသမီးသည်ယာကုပ်ကိုက Black "(p အကြား။ 221 )?
ဒါဟာအမျိုးသမီးအချစ်ဇာတ်လမ်းစိတ်ကူးယဉ် ( cf. အထီး porn) အတွက်ကြီးမားတဲ့ပရိသတ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင့်ပုံမှန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ရဲ့စျေးနှုန်းအားဖြင့်အတန်ငယ်ကျောက်စိမ်းဖြစ်လာသည်နီးပါးသော်လည်းအဖြစ်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်အခုအသစ်သောအရာတစ်ခုခု, ပြုပြင်မွမ်းမံဘို့ဆာငတျ, ဒါမှမဟုတ်ပင်ရဲ့ turbocharged အပြည့်အဝစိတ်ကြွဆေးက၎င်း၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးနှောက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်။ သော်လည်း alpha အထီးနေဆဲအလုပ်အကိုင်အပြုလိမ့်မည်။ ။ ။ ဘယ်လိုအချို့နှင့် ပတ်သက်. အထူးကောင်းမွန်သောAlpha? ထိုအလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်သူရဲကောင်းများကိုမှတဆင့်မီးမောင်းထိုးပြနိုင်ခေါ်ဆောင်သွားထင်ယောင်ထင်မှား၏အဆုံးမဲ့အပြောင်းအလဲကြိုးစားအားထုတ်မှုများကောင်းစွာ-အနီးသို့အသစ်အဆန်း၏အစွမ်းထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue စေသည်။ ထို့နောက်သင်တန်း၏, Vampire ( "Alpha ကြားတွင် Alpha") ဖြစ်ရပြီ, အမြဲတမ်း, ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်မိန်းမတို့အဘို့အထူးသဖြင့်ဖြားယောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
သူတို့အမျိုးသမီးပရိသတ်ကိုထံမှနောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်ကိုခိုင်လုံဖို့ဆိုရင်တောင်မှလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့သူရဲကောင်းများဖြတ်သန်းရမည်ဟုနောက်ဆုံးရင်ခုန်စရာကွင်းသူတို့ရဲ့ studly ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်, အမွေဆက်ခံကံဇာတာများနှင့်ပြင်းစွာသောအကာကွယ်ပေးတဘက်, သူတို့ကသူရဲကောင်းရဲ့ "ပဉ္စလက် Hoo နေဖြင့်အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုခံရနိုင်နေခြင်းဖြစ်သည် တစ်ဦးဝိရောဓိနူးညံ့ကျိန် ဆို. ပူဇော်မိတ်ဖက်-ယခုသောမိန်းမတို့ကိုအများဆုံးအလိုဆန္ဒ monogamous ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုမှကျူးလွန်နိုင်စွမ်းသို့ "Hoo ။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့ဝတ္ထုထဲမှာ, စူပါဟီးရိုးဖြစ်ပါသည်အချိန်မှာတောင် မဟုတ် လူ့ထက်အခြားအရာတစ်ခုခု, သူ့သူရဲအချိုးအစားနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသေးပါနောက်ဆုံးအချိန်မှာသူကပိုပြီးအဖြစ်လေးမွတျနှိုးဆော်ခြင်းတဲ့ထုံးစံ၌ပြန်ဆိုနေကြ ဒဏ္ဍာရီလာ နှိမ့်ချ-to-မြေကြီးတပြင်ပုလ်ထက်။ သူကတစ်ဦးသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘုရားဖြစ်မည်မဟုတ်ပါသော်လည်းသူနေဆဲဘဝထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့င်: (နီးကပ်စွာသူမ၏နှင့်အတူဖော်ထုတ်သူနှင့်ဝင်ပေါက်စာဖတ်သူကို,) ကိုသူရဲကောင်းလုပ်နိုင်သည်ဟုခေါ်ဆောင်သွားထင်ယောင်ထင်မှား၏မျိုးလွှမ်းမိုးသောတပ်မက်သောစိတ်နှင့်အတူဆွန်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတစ်ဦးကလက်တွေ့ကျကျမဖြစ်နိုင်ရောစပ်ပိုပြီးသဘာဝအပုံဖော်ခြင်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်ဖျော့စေခညျြနှောငျအချစ်ဇာတ်လမ်းတစ် rhapsodic မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောသူရဲကောင်းများပစ္စုပ္ပန်စာဖတ်သူများသို့မဟုတ်ကြည့်ရှု။ hyperstimulation အကြောင်းပြောဆို! -these dreamy သူရဲကောင်းများ, ကိုလညျး eerily ဟာစွဲလမ်းအာခေါင် tantalize မှအတုဖြစ်ကြသည်။
ထိုအထိုကဲ့သို့သောခေါ်ဆောင်သွား artifice ၏ Ogas နှင့် Gaddam ရဲ့အကျဉ်းချုပ်ကားအဘယ်သို့နည်း (စ။ 225) "ဂျပန် anime ယောက်ျားဦးနှောက် titillate ကြောင်းခေါ်ဆောင်သွားထင်ယောင်ထင်မှားများအတွက်အကြီးမားဆုံးသောဖန်တီးမှုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားလျှင်, ထိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းအမျိုးသမီးဦးနှောက်အဘို့သည်၎င်း၏ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်" ။
များစွာသောမိန်းမ (လိင်တူချစ်သူလိင်အမြဲအထီးအကြားအလွန်ရေပန်းစားခဲ့သကဲ့သို့) လိင်တူချစ်သူ porn နှိုးဆွရှာဖွေပါ။ သို့သျောလညျးဤကဲ့သို့သော porn ဆီသို့အမျိုးသမီးပုံကြီးထွားလာဆွဲဆောင်မှုနေဆဲ, ခေါ်ဆောင်သွားစိတ်ကူးယဉ်တဲ့ပုံစံကိုအထီး-to-အထီးအချစ်သီချင်းမှာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့အကျိုးစီးပွားမှဒုတိယဖြစ်နေဆဲ, ဒါမှမဟုတ် EroRom, (အနည်းဆုံးအားစီးပွားဖြစ်) ပင်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာတည်ရှိမမိန်းမတို့အဘို့ကိုပစ်မှတ်ထား။ ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ Brokeback Mountainအမျိုးသမီးတစ်ဦး-ပေးသောအမျိုးသမီးကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်အားဖြင့်စိတ်အားထက်သန်စွာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပါသည်ကရေးသား -originally တိုတောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းသူတို့ကပျော့ပြောင်းပြီး, ဂရုစိုက်တတ်တဲ့, စိတ်ခံစားမှုတဦးတည်း၏အစိတ်ပိုင်းတွေ့ရှိနေရသည်ဘူးအဖြစ်ဤအချစ်သီချင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆကျဆံရေးအပျေါဘယ်နေရာမှာအဖြစ်အများကြီးအာရုံစိုက်။
ဒါပေမဲ့ဒီမှာကအဓိကလမ်းကြောင်းသစ်သေအချာခေါ် "ပန်ကာစိတ်ကူးယဉ်" ၏ပုံစံများ၏အင်တာနက်ကိုအပေါ်တက်လာခြင်းလူကြိုက်များဖြစ်ပါသည် မျဉ်းစောင်း။ ဤတွင်ကျနော်တို့ဟယ်ရီပေါ်တာ / Draco Malfoy, ဒါမှမဟုတ် Frodo / Legolas အဖြစ်လိင်ကွဲအထီး၏ထိုကဲ့သို့သောလိုက်စားအထီး / အထီးဒဿနိကဗေဒရှိသည်။ ကျနော်တို့နက်ရှိုင်းနေ့စဉ်ဖြစ်နိုင်ခြေကနေသန့်စင်သောစိတ်ကူးယဉ်ဝေးလံခေါင်သီ၏ခေါ်ဆောင်သွားထင်ယောင်ထင်မှား-တစ်မြေပြင်အနေအထား၏စိတ်ကူးယဉ်လောကသို့အပ်နှံခဲ့ပါတယ်ကြောင့်တစ်ဖန်မှတ်ချက်, ။ သမားရိုးကျလိင်တူချစ်သူအချစ်ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များထက်အများကြီး "အထဲကနောက်ထပ်" ဟုအဆိုပါဇာတ်ကြောင်းပုံမှန်အနေနဲ့ unheralded လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အတူပိတ်သောဤပြောသောမုသာသေးတစ်သိသိသာသာအလားတူ "အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲ" ကြံစည်မှုဖွဲ့စည်းပုံမှာ feature နှင့် မဟုတ်မူလမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအပေါ်နှစ်ခုအထီးအကြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်ပတ်သက်မှု။ တိုတောင်းသောများတွင်အစောပိုင်းကအချစ်ဇာတ်လမ်းဝတ္ထု၌ရှိသကဲ့သို့, ဒီစိတ်ကူးယဉ်စိတ်ကူးကောင်းကောင်း (သို့မဟုတ်ဥသုံ) ပိုကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဦးစားပေးလုပ်ဖို့ကိုက်ညီဖို့အထီး psyche ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
Ogas နှင့် Gaddam တို့ကဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မျဉ်းစောင်းပုံပြင်သန်း ၅၀၀ ကျော်ကိုတွေ့နိုင်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးနီးပါးသည်အပျော်တမ်းအပျော်တမ်းများကရေးသားထားသည်။ ထို့အပြင်ဤစာရေးဆရာနှစ် ဦး ကဤစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းသည်အမျိုးမျိုးသောအမျိုးသမီးနှိုးဆွမှုများနှင့်အမြင်အာရုံများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းတွင်အမျိုးသမီးများအားယောက်ျားများအတွက်လိင်တူချစ်သူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများထက် ပိုမို၍ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေသောထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကြံပြုသည်။ အထီး ဦး နှောက်သည်စာပေ၏ထင်ယောင်ထင်မှားများကိုတုန့်ပြန်နိုင်ခြင်းမဟုတ်ပါ (သို့မဟုတ် O&G ဟုခေါ်ဆိုသည့်အတိုင်း“ ခေါ်ဆောင်သွားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှည့်စားမှုများ”) မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းတို့အားဖွင့်ပေးသည့်စာလုံးသည်မျဉ်းစောင်းပုံပြင်များ၊ အမျိုးသမီးများအတွက်အလွန်နှိုးဆွနိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်း။
ငါကဒီမှာရည်ညွှန်းတယ်သောယောက်ျားစာပေအမျိုးအစားအဖြစ်လူသိများသည် အသွင်ပြောင်းတ္ထု။ ယင်း၏အစွန်းရောက်နာမကိုအမှီ Self-ရှင်းလင်းဖြစ်နိုင်သည်စဉ်နှင့်အညီ, ကခဝါသည်စရိုက်လက္ခဏာတွေခိုင်လုံဖို့လုံလောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းပါပဲ။ Ogas နှင့် Gaddam ရဲ့စကားချမှတ်ရန်: မှော်, ဓာတုပစ္စည်း, ဂြိုလ်သားနည်းပညာ, မျိုးဗီဇခြယ်လှယ်, ဒါမှမဟုတ်ခွဲစိတ်: "အသွင်ကူးပြောင်းရေးပုံပြင်များမှာတော့လူတနည်းလမ်းများတစ်ဦးပြိုးပြိုးပြက်ပြက်အမျိုးမျိုးမှတဆင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုနီးပါးအမြဲ [ဆိုလိုသည်မှာသူက "တင်သွင်း" ရမယ်လို့] unwillingly တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ။ ။ ။ နောက်ဆုံးတော့သို့သော်သားကောင် womanhood "(စ။ 232) ဆောင်တတ်၏သူ၏ပြောင်းလဲမှုညှိများနှင့်ပျော်ရွှင်စွာကသူ၏အသက်တာသစ်ကိုလက်ခံမှကြွလာ, လူအပေါင်းတို့အခွင့်အရေး။
ဒီတော့မေးခွန်း, ရှိသမျှပေးထားကျနော်တို့ပုံမှန်လေ့ရှိပါတယ်အရှိဆုံးအရာ၏ (အပေါ်ယောက်ျား turn သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူပြီးပြီဖြစ်ပါတယ် နှစ်ခုလုံး ) ယောက်ျားနှင့်ဇာတ်နိမ့်ဖြောင့်ကရေတွင်း, "သာမန်" ၏ကြင်နာဖြစ်မည်အကြောင်းအသွင်ပြောင်းတ္ထုတွေအကြောင်းကဘာလဲ? ထိုအဖြေသို့သော်ထူးဆန်းအလှည့်-on ရဲ့ဒီရွေးချယ်မှုပိုင်းတွင်နေဆဲပေါ်လာလိမ့်မယ်, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ သဘာဝ ကကမ်းလှမ်းလိင်ဆုလာဘ်၏ခဲဆန်းပါပဲ။ အသစ် metamorphosed အမျိုးသမီးသူမကကောင်းစွာ-Hung ယောက်ျားအမျိုးမျိုး gratify sexually ရမယ်ဘယ်မှာအခြေအနေများတွင်သူ့ကိုယ်သူတွေ့အဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်များယေဘုယျအားဖြင့်ကရာလိင်နှင့်အတူ teeming ဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားပါ။ ဒီ "သူ" "သူမ" ယောက်ျား-ထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏တပ်မက်ခြင်းအဘို့အဘို့အစွမ်းထက်အမြင်အာရုံတွေကိုကိုယ်စားပြုသမျှသော features တွေ embodying, လိင်နတ်ဘုရားမတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာအဖြစ်ပုံဖော်နေသည်လှည့်ကတည်းကပြောင်းလဲအထီးပုံမှန်အား, လူတို့သညျသူတို့မျက်စိဖွင့်နှင့် drool စေသည်မှာလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါ သူမ၏မထိန်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ "ဒီပုံပြင်များတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖရက်ဒရစ်ရဲ့ဟောလိဝုဒ်၏ (များအတွက်ကြော်ငြာတူသောဖတ်ပါ: သူမ၏ရင်သား Ogas နှင့် Gaddam ယူဆကြသည်ကြောင်း, တကယ်တော့တာဒါ, (အပို-အပိုကြီးမားသောရန်) ကြီးမားသောခြေရင်းကျစ်လျစ်သေးသွယ်နှင့်သူမ၏စားဆင်ယင်အလွန်အားလိုက်စားခြင်းနှင့်ဖက်ရှင်-ဒါများမှာ !) ။
ဒါဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကို၏အနက်ရှိုင်းဆုံးအများစု narcissistic ထောင့်၌နီးပါးသော်လည်းအဖြစ်ဖွင့်, များစွာသောယောက်ျားအစားမရှိတော့တစ်ခု "စီးပွားရေးအရာဝတ္ထု" အဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ရန်ရှိသည်မှတောင့်ပေမယ့် ယဉျ သူတို့ရဲ့အာရုံမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုကျော်ပေးခြင်းနှင့် flatteringlya"ကိုလိင်အရာဝတ္ထု" (တစ်ဦးအဖြစ်ကိုရိပ်မိခံရ ဝိသေသလက္ခဏာ မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပေါ်သို့မျက်မှောင်ကြုတ်အမျိုးသမီးအများစု) ။ အမျိုးသမီး psyche ၏အခြေခံ, အစားကနေလည်းသော်လည်းနားလည်မှုလွဲမှုနှင့်အတူသူတို့တစ်နည်းနည်းနဲ့လျှင်စိတ်ကူး သူတို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးခဲ့ကြသည်, သူတို့ကဆက်ဆက်သူတို့ရဲ့မှာပါတဲ့၏အားသာချက်ယူချင်ချင်ပါတယ် ကျား, မ unrestrainedly အမည်မသိလိင်၏ထုတ်ဝေပမာဏမြားတှငျပါဝငျခွငျးအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါ့အပြင်အမျိုးသမီးတွေအဖြစ်သူတို့ကြောင့်ပဋိသန္ဓေ ယူ. မရနိုငျ အလိုမရှိလိင်တံအရွယ်အစားနှင့်အတူသာအာရုံစိုပါစေ။ မဆိုတကယ်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့် sexing များအတွက် compulsive တပ်မက်ကျော်လွန်တည်ရှိလျှင်, မိမိတို့၏အသစ်တွေ့ရှိထားတဲ့မိန်းကလေး hypersexuality ပေးထားခြားနား, သူတို့ဖြစ်နိုင်သည်, ထိုစိတ်ခံစားမှု-သည်၎င်းတို့၏ဖို့အများကြီးစဉ်းစားပေးခြင်းစိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။
ထိုကဲ့သို့သော peculiarly ပုလ်စိတ်ကူးယဉ်ထက် ကျော်လွန်. , ငါ၏နောက်ဆုံး post ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, "Dominant သို့မဟုတ်တင်သွင်းခဲ့တဲ့? လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဝါ၏ Paradox ။ " အခြားအမှုအရာတို့ကိုတွေထဲမှာငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်သွင်းခဲ့တဲ့-အဖြစ်၏စိတ်ကူးယဉ်ကောင်းကောင်းအဖြစ်ကြီးစိုး-နိုင်ပါတယ်အထီးဦးနှောက်၏အကျိုးကိုစင်တာများကိုသက်ဝင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအကြောင်းကိုအဲဒီမှာပြောဆိုပါ။ ဒါကြောင့်အသွင်ကူးပြောင်းမှုတ္ထု (1) နဲ့အသံထွက် နားထောင်ခြင်း တွေကို (2) အမျိုးမျိုးသောအထီးမှဆက်ပြောသည်နေကြတယ် မြင်သာသော အမျိုးသမီးရဲ့နုပျိုပုံပန်းသဏ္ဌာန်များနှင့်ဖြားယောင်းခန္ဓာဗေဒ-ထားတဲ့နောက်ထပ် (3) ကလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်းတွေကို, အစွမ်းထက် စိတ်ဓါတ် အခိုငျအမာဖြစ်ခြင်းအတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ unashamedly ပြလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ecstasy န်းကျင်ဆုံလည်တွေကိုခိုင်ခံ့, virile အထီးက "ယူ" ။ ကျနော်တို့ဖော်ပြအများဆုံး arousal ထုတ်ယူနိုင်ရန်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ဂရုတစိုက်ထွင်းထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု cornucopia အတူတက်အဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။ လူကိုတကယ်စိတ်ထဲ-မှုတ်တဦးတည်းအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးနေ orgasm-သို့မဟုတ်အစွမ်းထက် "အကူအညီအထောက်အပံ့များကို" အကြောင်းပြောဆို!
ဤရွေ့ကား,, နောက်ဆုံးတော့ဒါကြောင့်ကောင်းစွာ Ogas နှင့် Gaddam နေဖြင့်ရုပ်ပြအမျိုးမျိုးသောခေါ်ဆောင်သွားထင်ယောင်ထင်မှား၏တပြင်လုံးကိုအမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကျနော်တို့ (ဤလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ-couldn't လိပ်စာ၏အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအပေါ်စာရေးဆရာများ-အာရုံစူးစိုက်ရာ) အရေးကြီးသောမေးခွန်းနှင့်အတူကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ထို On-အများအားဖြင့်အင်တာနက်ချီးမွမ်းနောက်ဆုံးမှာကောင်းတစ်ဦးအရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-ဖြစ်ပါတယ်လှုံ့ဆော်မှု၎င်း၏နီးပါးကြိုးစားအားထုတ်မှုများပေးဝေရေးလှည့်တဲ့အပေါငျးတို့သသူတွေဟာကြီးထွားနည်းလမ်းတွေရှိမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နည်းပညာများအတွက်နည်းတူအများကြီးသုံးနိုငျကွောငျးသိရ ဆိုးသော ကောငျးကြိုးအတှကျအဖြစ်။ ဒါပေမယ့်ခေတ်ပြိုင်ညစ်ညမ်းအကြောင်းကို, အရာများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသိသိသာသာဘာတွေလုပ်နေလဲ တိုးမြှင့် နည်းပညာအားဖြင့်?
တကယ်တော့ဒီဒေသမှာမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများယခုဒီတော့ဖောဖောသီသီကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် "အငှားလိင်" ကိုအနုတ်လက္ခဏာဖုံးကွယ်တစ်ခုဌန်ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါတွေ့ရှိချက်သံသယမရှိသီးခြား post တစ်ခုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒီတော့ငါ့အလာမည့်နှင့်နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုအတွက်ငါအတွက်ပစ္စည်းထက်ကျော်လွန်သွားပါလိမ့်မယ် တစ်ဦးကဘီလီယံဆိုး Thoughts ယခုထက်ပိုသောသုံးစွဲနိုင်, စျေးသက်သက်သာသာနှင့်စွဲလမ်း-ထက်အစဉ်အဆက်မတိုင်မီဖြစ်ခြင်းသည်အင်တာနက် erotica နှင့်ညစ်ညမ်း၏ရလဒ်အဖြစ် surfacing ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်ကိစ္စများအပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်အစီရင်ခံစာများအနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
1 မှတ်ချက်: ငါနှင့်အတူအဆက်စိတ်ဝင်စားစာရှုသူများအကျွန်ုပ်သည်ရေးသားချက်များ၏ဤစီးရီး (ကိုယ့်ကိုငါ့ပုံရိပ်ကိုအထက်, စာမျက်နှာ၏အပေါ်ပိုင်းညာဘက်ခြမ်းအပေါ်လိမ္မော်ရောင်ရေဒီယို signal ကို icon ကိုကြည့်ပါ) ငါ့အကို RSS feed ကိုစာရင်းသွင်းရန်ဆန္ဒရှိမယ်ကောက်ချက်ချအဖြစ်။ ဒီနောက်ဆုံးအပိုင်းကို posted သောအခါသင်တို့ကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်ဒါကနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မှုအတွက်ခေါင်းစဉ်များ အားလုံး ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်မှာငါ့ဆက်စပ်အရေးအသား၏အောက်ပါ (နှင့်ငါပြီးသားထုတ်ဝေကဏ္ဍများမှလင့်များထောက်ပံ့ပါတယ်) တို့ပါဝင်သည်:
အဘယ်အရာကိုဦးနှောက်သိပ္ပံ (အပိုင်း 1-များအတွက်အထီးလိင် Desire ၏ SexThe TRIGGER အကြောင်းကိုသင်သွန်သင်နိုင်သလား, & အပိုင်း 2-များအတွက်မိန်းမတွေက
အမျိုးသမီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire အတွက်ဝိရောဓိများနှင့်လက်တွေ့ကျကျ
အင်တာနက်ကိုစည်းမျဉ်း # 34-ဒါမှမဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘယ်အရာကိုစိတ်ဝင်စားမှုများပုံမှန်ဖြစ်ပါသလား
အမျိုးသားလိင် Desire ၏လျှို့ဝှက်ချက်, မညီကြောင်း aspect
လွှမ်းမိုးသို့မဟုတ်တင်သွင်းခဲ့တဲ့? လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်ပါဝါ၏ Paradox
အဘယ်ကြောင့်အမျိုးသမီးများ Serial Killers များအတွက် Fall သလား?
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: ၎င်း၏ဘေးနှင့် Pitfulls
2 မှတ်စု: သင် (ငါအရမ်းမျှော်လင့်ချက်အတိုင်း) သိရှိတချို့လမ်းအတွက်ဒီ post ကိုတွေ့လျှင်, ငါသည်သင်နှင့်အတူဝေမျှထည့်သွင်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်စိတ်ချအခြားသူတွေ-ဒါကြောင့်သူတို့လည်းဘာသာရပ်အပေါ်အသိအမြင်အသစ်သိမ်းသွင်း ထား. ပေလိမ့်မည်။
© 2012 လီယွန်အက်ဖ် Seltzer, Ph.D ဘွဲ့ကို မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။